August 16, 2020 2773
काठमाडौँको गोङ्गबुमा यही साउन २५ गते रोल्पाका कृष्णबहादुर बोहराको बी भत्स ह त्याकाण्डका रहस्यको केही पाटो सार्व”जनिक भएको थियो ।
घटनाको अनुसन्धानका क्रममा चितवनको कालिका नगरपालिका–७ घर भई हाल टोखाको सोही क्षेत्रमा बस्ने ३७ वर्षीय कल्पना मुडभरी पौडेलले घटना घटाएको रहस्य खुलेको थियो ।
प्रहरीले साउन २६ गते नै उनलाई चितवन प्रहरीको सहयोगमा माइतीमा रहेको बेला कालिका नगरपालिका–९ शक्तिखोरबाट प’क्राउ गरेको थियो ।उनीहरु बीच तीन÷चार वर्षदेखिको फेसबुक’मार्फत चिनाजान रहेको पत्ता लागेको छ ।
अनुसन्धानका क्रममा मृ’तक बोहराले अभियु’क्तको फोटो राखी नक्कली फेसबुक आइडी बना’एर चलाउने गरेको र महिलालाई आफु अनुकूल हिंड्नका लागि दवाव दिने गरेको खुल्न आएको एसएसपी थापाले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार छोरीलाई समेत उनले आँखा लगाउने गरेका थिए । तर, ह त्यामा त्यती मात्रै कारण भन्नेमा प्रह’री ढुक छैन । अन्य कुरा अनुसन्धानपछि मात्रै खुल्ने जनाइएको छ ।
घ’टना भएको दिन राति महिलाले आफ्नै को’ठामा बोलाएर म दिरासहित दही, चिउरा मा’सुसमेत खान दिएको खुल्न आएको छ । दहीमा पाँच वटा निद्रा लाग्ने औषधी मिसाएर खुवाएकी थिइन् ।
त्यसपछि बोहरा ल’ठ्ठिएर सुतेपछि फलामको हम्मरले अण्डकोषमा हा नेर मा रेको अ नुसन्धानमा खुलेको प्रहरीले जनाएको छ ।
त्यसपछि सलले बाँधी धा रिलो ह तियार प्रयोग गरी टाउको र खुट्टा छिनाइ झोलामा राखेर आफैँले फ्याँकेको महि’लाले बयान दिएकी छिन् । उनले घ’टना स्वीकार गरेको र अन्य पाटो भने अ नुसन्धानको क्रममा रहेको एसएसपी थापाले बताउनुभयो ।
काठमाडौंको गोंगबुमा भएको ह त्या प्रकरणले अझै पनि धेरैको मानसप’टलमा एउटा प्रश्नले डेरा जमाएको छ । विभ’त्स ह त्या त्यो पनि महिलाबाट , यो सम्भव छ र ?
प्रहरीका प्रार’म्भिक अनुसन्धान र कल्पनाको प्रह’री समक्षको साविती वयानले यही कुरा पुष्टि गरेको छ । तर यो घट’नाले कल्पना आफु त अप’राधको खाड्लमा फसिन नै, आफ्ना नाबालक छोराछोरी मात्र नभएर अर्काको जग्गा कमाएर खाने बाबुआमालाई पनि क’ष्टमा पारेकी छिन् ।
आमासंग पनि वास्तविकता लुकाएकी थिइन कल्पनाले:
गोंगबु स्थित एक होटलमा बस्दै आएका रोल्पा रून्टीगढी गाउँपालिका ७ का ४५ वर्षीय कृष्णबहादुर बोहोराको ज्या न लिएको अभियोगमा प्र’हरीले चितवन घर भई हाल काठमाडौं बस्दै आएकी कल्पना मुडभरीलाई चितवन प्रहरी’को समन्वयमा कालिका ९ शक्तिखोलाबाट नियन्त्र’णमा लियो ।
प्रहरी समक्ष कल्पनाले ह त्या स्वीकार गरिसकेकी छन् । चितवन घर भएकी कल्पना छोराछोरीसँगै डेरा लिएर त्यहाँ बस्थिन् । घ टना घटे लगत्तै कल्पना एम्बुलेन्सको सहयो’गमा माइती घर पुगेकी थिईन् । तर माइती घरमा भएका बाबुआमालाई प्र’हरीले नियन्त्र’णमा लिँदा समेत छोरीको क’र्तुत बारे थाहा नभएको बताउछन् ।
घट’ना घटाएर घर जानु पहिले कल्पनाले आमालाई आफ्नो स्वास्थ्यमा स’मस्या आएको र केही समय आ’राम गर्नुपर्ने भएकोले घर आउने कुरा बताएकी थिइन् ।
प्र’हरीले ला’स भेटेर घर/घरको खा’नतलासी सुरु गरे पछि उनले आमालाई कसैको श’व भेटिएको र प्रह’रीले खान’तलासी सुरु गरेको र बच्चाहरु समेत आत्ति’एको भन्दै माइती आउने कुरा पुनः बताएकी थिइन् ।
बेलुका ६ बजेतिर उनले काठमाडौँबाट हिडेको र खाना ब’नाएर राख्नु भनेकी थिइन् । राति पुगेकी उनले आमालाई पनि केही कुरा समेत बताएकी थिइनन् ।
सिभिलमा प्र’हरी पुग्दा गाई किन्न मानिस आए भन्ने लाग्यो कल्पना’की आमालाई:
प्रह’री आफ्नो घर आउँदा पनि कल्पनाकी आमाले गाई किन्ने मानिस आएको भन्ने सोचेकी थिइन् । साधा पोशाकमा आएका प्रह’रीलाई उनले पनि चिनिनन् । घरमा आएका प्र’हरीलाई किन आएको भन्दा पनि कारण भनेनन् ।
प्रह’रीले नियन्त्रण’मा लिनु एक दिन अगाडि साधा पोशाकमा आएका प्रह’रीले सोधी खोजी गरेका भए पनि उनले छोरीले गरेको कुरा थाहा नै पाइनन् । आफ्नो घरमा आएर ढोका थुनेर छोरी’लाई सोधी खोजी गरेको देख्दा पनि उनले विषय के हो भन्ने पत्तो पाएकी थिइनन् ।
सिभि’ल ड्रेसमा गएका कर्मचारीलाई उनले आफुपनि घरभित्रनै जाने र घट’नाको विषयमा जान्ने भनेपछि मात्र ह त्याकाण्डको विषय छ तपाई चुप बस्नुस् भनेका थिए ।
जे गरेपनि मुटुको टु’क्रा त हो सन्तान भनेकाे : कल्पनाकी आमा
एकैपटक सोमबार आएर प्रहरीले नि’यन्त्रणमा लियो, आमा भन्छिन, यदि यस्तो कुरा थाहा भएको भए केही कुरा सम्झाउने थिए, जस्तो भएपनि मुटु’को घा’उ हो, उनी भन्छिन् ।
साधा पोसाकमा आएका प्र’हरी गएपछि उनले छोरी कल्पनालाई सोधेकी थिइन्, घट’ना केहो ? किन आएका तिनीहरु तर कल्पनाले आफुलाई फसा’इदैँ गरेको बताएकी थिइन् । कल्पनाका बुबाले पनि छोरीको कर्तु’तको बारेमा थाहा पाएनन् ।
अर्काको जग्गा कमाएर बसेका बाबुआमा क’ष्टमा परे:
आफ्नो जग्गा जमिन नभएका कल्पनाका बुबा आमा अर्काको जग्गा अधियामा लिएर खेती किसानी गरेर चितवनमा नै बस्थे । शारीरिक रुपमा अस्वस्थ रहेका बुबा आमा कहिलेकाहीँ छोरीको कोठामा आउथे तर छोरीले यस्तो गर्लिन भन्ने कहिले नसोचेको बताउछन् । उनका बुबा भन्छन्, छोरीले यस्तो घ’टना घटाइन भन्दा पनि पत्यार लागको छैन ।
कल्पनाले आमालाई भनेकी थिइन : घरभाडा तिर्न नस’केको धेरै भयो:
आमा भन्छिन्, त्यो एउटा मेरो छोरीको दु’र्भाग्य नै थियो होला ! कसैको ज्यान लिनु भन्ने कुरा सजिलो कुरा होइन ऊ माथि केही भएको होला ।
मेरो छोरी नाती नातिनीलाई भ्यानमा लगे रे भन्ने सुन्यौँ, छोरीले मलाई फसा’उन लागेको हो भन्ने वित्तिकै बेहोस् जस्तै भएछौँ उनीहरु भन्छन् । घरबेटीको भाडा तिर्न नसकेको धेरै भएको छ भनेकी थिइन्, कल्पनाले । – न्युज २४ नेपाल
यसै बीच कल्पना कलाकार समेत रहेको र उनि अभिनित सरी ल नामक सर्ट मुभी चर्चामा छ । यो भिडियो परिधि मिडियाले आईतबार सार्वजनिक गरेको छ । कल्पना अभिनित ‘सर्ट मुभी’ बाहिरियो, यस्तो रहेछ उनको अभिनय टाइटल राखेर भिडियो सार्बजनिक गरिएको छ ।
हेर्नुहोस् सार्वजनिक भएको उक्त भिडियो …
Prevमनिषा कोइरालाको जन्मदिन आज, कति वर्ष पुगिन् त उनी ? हेर्नुहोस्
Nextबढ्यो संक्रमितको संख्या, आज कुन जिल्लामा कति संक्रमित भेटिए ? हेर्नुहोस्…
डलरको भाउ बढ्यो, अन्य देशको मुद्राको भाउ पनि बढ्यो..